Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 17, 2018
Sachigaro weMDC-T inotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaMorgen Komichi, vanosungwa vachibva vavharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza hurongwa hweZimbabwe Electoral Commission, hwekuzivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mapurisa anoti achaendesa VaKomichi kumatare mangwana.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo vari kupikiswa naVaChamisa mudare reConstitutional Court kukunda kwavo musarudzo yemutungamiri wenyika, vanotenda nyika dzemuSADC nekuvatsigira kwadzakaita musarudzo dzavanoti dzakanga dziri pachena uye dzisina mhirizhonga.
Rimwe sangano rakavambwa nechizvarwa cheZimbabwe riri kuBritain robatsira nherera makumi matatu neshanu dzinobva mumaruwa akasiyana siyana.
Hupenyu hwevana veZimbabwe vari kugara muBotswana hwopinda munhamo yachikwepa youti uku charumwa, uku chiri kupiswa nemoto zvichitevera danho reBotswana rekugadza mitemo inosungira nyika iyi kutanga kupa mabasa kuzvizvarwa zvenyika iyi, vekunze vasati vapihwa mabasa.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa musangano weSADC uri kuitirwa kuNamibia…